Ao Paragoay, Mety Hamelezana Anao ny Rakitry ny Toe-Pahasalamana sy ny Toe-Bolanao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2017 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Ελληνικά, Français, русский, Italiano, Español
Iray amin'ny fandravahana andiany Pyrawebs avy amin'i El Surtidor. Nampiasaina avy amin'ny lisansa Creative Commons.
Izao lahatsoratra izao dia fampanaraham-bolontany avy amin'ny andiam-panazavana an-tsary The Return of the Pyrawebs (Ny fiverenan'ny Pyrawebs) novokarin'i El Surtidor, manadihady ny resaka fiarovana nomerika ao Paraguay.
Ny fandavana hampiditra mpianatra amin'ny sekoly katolika iray miahy tena tao Asunción, renivohitr'i Paragoay, no mampiharihary izay mitranga rehefa mifanakalo sy manao ho loharanom-pihariana lahatahirin'olona manokana ny orinasa. Araka ny tatitry ny fampitam-baovao, nandoa ara-potoana ny saram-pianarana ny fianakaviana, saingy tsy nekena ny fanohizany fianarana satria tafiditra lisitra mainty noho ny tsy fandoavan-trosa ny mpiantoka azy.
Notehirizin'ny Informconf, orinasa miahy tena iray izay mandrakotra ny raharaham-barotry ny atsasaky ny mponina ao Paraguay, manana ny lisitra maintin'ireo ananan-trosa ny lahatahiry.
Mitatitra ny raharaha ho fanavakavahana ny ray aman-drenin'ny zaza, ary na dia mitovy hevitra ny amin'izany aza ny minisiteran'ny fanabeazana, dia tsy nisy ny hetsika natao itoriana ny sekoly. Heverina fa ny arsheveka no mitantana ny andry katolika, ary vokatr'izay dia tsy mamaly ny [fanontanian'ny] fanjakana, eny fa na dia heverina ho tompon'andraikitra amin'ny fanavakavahana atao amin'ny tsy ampy taona aza ireny sekoly ireny.
Tsy ny sekoly miahy tena na ny sampandraharaha mampisambo-bola ihany no afa-mijery toe-bolan'ny olona, fa na dia ireo mety ho mpampiasa ihany koa aza. Vokatr'izany, na dia misy aza ny lalàna efa nankatoavina isorohana indrindra ny karazana fanavakavahana tahaka izao, dia sarotra ho an'ny olona ananan-trosa ny mahazo asa sy mamerina ny trosa.
Ao amin'ny sary: Voahilikilika satria tafiditra ao anaty [lahatahirin'i Informconf]. Mitantana ny lahatahirin'ny asam-barotry ny atsasaky ny mponina ao Paragoay ny Informconf. Tsy misy ny fetra farany ambany hahatafiditra anao ao anatin'ny lisitry ny olona ts mahaloa trosa. Noho ny fisian'io lahatahiry io dia manapa-kevitra amin'ny fanomezana trosa na tsia, sy anombanana izay mety ho mpiasany ny orinasa. Eo amin'ny sioka: Iray amin'ny fomba entin'ny orinasa miahy tena ampiasana ny lahatahiry andavanandro hanavakavahana olona izao. Mijere bebe kokoa [ao amin'ny rohy].
Na ny lahatahirinao aza mety ho tsy voaaro
Tamin'ny taona 2016, nitaraina ho voaroaka tao amin'ny akademia miaramila noho ny fitondrana tsimoka VIH ny zatovolahy iray. Rehefa nampijalian'ny lehibeny sy nalaim-baraka izy dia noterena hiala tao amin'ny akademia.
Na dia teo aza ny fandrarana tamin'ny taona 2009, dia mbola nisy orisana miisa 27 voampanga ho mitaky valim-pitsirihana VIH tamin'ny mpiasan-dry zareo ihany tanelanelan'ny taona 2012 sy 2016. Ny sasany amin'izy ireo aza mampanao fitsirihana tsy misy fampahafantarana na fankatoavana avy amin'ny mpiasany mandritra ny fizahana ara-pahasalamana fanao mahazatra.
Amin'ny fahafantarana izany toe-javatra izany, nisy fanadihadiana vita tamin'ny taona 2016 nataon'ny TEDIC, fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana manoka-tena amin'ny resaka zo nomerika ao Paragoay, miaraka amin'ny Electronic Frontier Foundation. Nahitana vokatra mampanahy izany fanadihadiana izany:
Ao anatin'ny olana hafa maro, iray amin'ny olana lehibe tononin'ny tatitra ny tsy fisian'ny lalàna natao hiarovana ny lahatahiry manokan'ny olompirenena, izay heverina ho fanadinoana goavana amin'ny fanarahana ny fenitra iraisampirenena hiarovana ny zon'olombelona. Ankoatra izany, tsy mifanaraka amin'ny fotokevitry ny fandanjalanjana sy ny fiantohana ara-pitsarana takian'ny fenitra iraisampirenena ny fenitra ao an-toerana miompana amin'ny fanaraha-maso ny serasera ao an-toerana. Vao maika miampy trotraka io faharefoana io noho ny fanekena lembenana amin'ny andry tahaka ny Servisim-Pitsikilovana Nasionaly izay mampiasa ny fandresen-dahatry ny “fiarovam-pirenena”.